जनमोर्चामा नैतिकता बाँकी थियो, त्यो पनि सकियो: डा. शेखर कोइराला - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com जनमोर्चामा नैतिकता बाँकी थियो, त्यो पनि सकियो: डा. शेखर कोइराला - खबर प्रवाह
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता डा. शेखर कोइरालाले राष्ट्रिय जनमोर्चाको नैतिकता पनि सकिएको बताएका छन् । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुँदै गर्दा जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही बेपत्ता भएपछि डा. कोइरालाको यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
पछि उनलाई अस्पतालको आइसीयूमा फेला पारिएको थियो । तर उनको कारोनाको पीसीआरको रिपोर्ट नेगेटिभ रहेको थियो । पीसीआर परीक्षणमा नेगेटिभ देखिएपछि फेरि अस्पतालले पोजेटिभ भनेर भर्ना गर्नु दुःखद भएको डा. कोइरालाले बताए ।
यो घटनापछि डा. कोइरालाले प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘विकृति विसंगति केन्द्रमा त थियो थियो प्रदेशहरुमा पनि आयो । नेपाली राजनीतिमा यतिधेरै विकृति बढेर गएको छ यसलाई रोक्नुपर्नेछ ।’